प्रा.डा. जनार्दन सुवेदी शुक्रबार, असार १२, २०७७, ०९:२२:००
नेपाली समाज यतिबेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले सहयोग स्वरुप दिन लागिरहेको अनुदान रकम लिने कि नलिने भन्ने विषयमा विभक्त भएको छ । एमसिसीका रुपमा अमेरिकाले नेपाललाई दिन प्रस्ताव गरेको सहयोगको उद्देश्य र ध्येय के हो त्यसबारे आफूले अध्ययन नगरेका कारण त्यो लिन हुन्छ या हुँदैन, त्यो मैले जान्ने कुरा भएन । लामो समयदेखि अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न भएका नाताले पनि होला, जुन विषयमा अध्ययन गरिएको छैन, त्यस विषयमा जान्ने बनेर धारणा सार्वजनिक गरिहाल्न पनि शोभनीय हुँदैन । तर आज नेपाली समाज यसबारे यसरी वादविवादमा उत्रिएको छ कि, मानौँ त्यहाँ टोलटोलमा अन्तराष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ छन् र घरघरमा एमसिसीका अध्येता ।
यो अनुदान नेपालको हितमा छ या छैन, यो स्वीकार गर्नुहुन्छ या अस्वीकार, त्यो नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरुले निष्कर्ष निकाल्ने विषय हो । म यति मात्रै आशा गर्छु– कम्तीमा पारदर्शिताको आजको युगमा देशलाई फेरि पनि भड्खालोमा हाल्ने र आफू चाहिँ भ र्‍याङ उक्लिने दुस्साहस उनीहरुले गर्ने छैनन् । अमेरिकी नीतिबारे थोरबहुत जानकार रहेका कारण यति चाहिँ भन्न सकिन्छ– अमेरिकीहरु कुनै पनि नीति आजका लागि होइन, कम्तीमा अर्को केही दशक हेरेर बनाइरहेका हुन्छन् ।
एमसिसीका रुपमा नेपालमा पस्न खोजिरहेको अमेरिकी अनुदानले दीर्घकालीन रुपमा के उद्देश्य राखेको भन्ने पहलुहरुबारे जानकार नभएको भए पनि एउटा कुरा चाहिँ जोकोहीले पनि सहजै भन्न सक्छ । त्यो के भने बिना कुनै कारण विना कुनै उद्देश्य वा भनौँ बिना कुनै स्वार्थ हामीलाई कसैले पनि केही दिँदैन । हरेक कदमको मूल्य चुकाउनुपर्ने आजको पुँजीवादी युगमा हामीलाई बिना कुनै उद्देश्य दयामाया गरेर कसैले अनुदान दिन्छ भने त अर्कै कुरा । नत्र बिना कुनै मूल्य हामीलाई कसैले केही दिँदैन । त्यसैले आवरणमा जे लेखिएको भए पनि त्यसको भित्री उद्देश्य कहीँ कतै फेरि पनि हाम्रो मातृभूमिलाई आफ्नो क्रिडास्थल बनाउने नहोस् । यसतर्फ सबै सचेत नेपालीले खबरदारी गरिरहनैपर्छ ।
एमसिसीको माध्यमद्वारा नेपाललाई गरिन लागेको सहयोग लिने या नलिने भन्ने विषयमा हाम्रो समाज विभक्त भइरहेका बेला हामीले गुमाउँदै गरेको मौलिकता र निर्णय क्षमताबारे विवेचना गर्न आवश्यक छ । देश कति धेरै परनिर्भर भइसकेछ भन्ने कुरा पनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । केही अर्ब रुपैयाँका लागि हामीले गरिरहेको मरिहत्तेले भनिरहेको छ हामी अरु कसैले फ्याँकेको हड्डीका लागि देशलाई जस्तोसुकै दाउमा लगाउन पनि पछि पर्दैनौँ ।
यो त पछिल्लो शृंखला मात्रै हो । हामीले यस्तै सहयोग र अनुदानका नाममा देशलाई विदेशीको परेड खेल्ने मैदान जानेर नजानेर यसअघि नै बनाइसकेका छौँ । देशको राजनीति मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा बाह्य शक्तिलाई निमन्त्रणा दिँदै आफ्नो मौलिकताको घाँटी निरन्तर रेटिरेहेका छौँ । हुन त निम रोपेर नास्पातीको अपेक्षा गर्नु नै मुर्खता हो । जे व्यवस्था हामीले अरु कसैको सहयोग र योजनामा ल्यायौँ, यसमा जे फल्थ्यो त्यो अहिले फलिरहेको छ । अरुले लेखेको पटकथामा नाटक मञ्चन गर्दागर्दै हामीलाई आफू को थियौँ, आफ्नो देश के थियो र हाम्रो क्षमता के थियो पनि बिर्सिसकेका हौँला ।
नेपालमा विकास भएको राजनीतिक संस्कारले देशलाई कहाँ पुर्‍याइरहेको छ भने आज हामीलाई हाम्रो आफ्नो मौलिक कुरा केही मन पर्दैन । यदि साँच्चिकै देशलाई सही हिसाबले अघि बढाएको भए आज हामीले केही अर्ब रुपैयाँका लागि कसैसँग हात थापिरहनुपर्ने थिएन । जनताको इच्छा र आकांक्षा बमोजिम देशलाई अघि बढाएको भए हामी आज विकासको अर्को चरणमा पार गरिसकेका हुने थियौँ । हामी आफूलाई बुख्याँचाको रुपमा उभ्याउँदै अरु कसैको निर्देशनमा निरन्तर चलिरहेका छौँ, र त आज हामी देशको बजेट परिपूरण गर्न मात्रै होइन, आफ्नै राष्ट्र सेवकहरुलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि विदेशीसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ ।
एउटा अचम्मको कुरा त के भने हाम्रो बजेटको ठूलो हिस्सा विदेशी ऋण र अनुदानले भरिएको हुन्छ । देशलाई अघि बढाउन विदेशीले दिएको दान थापिरहनुपर्ने अवस्था छ । विदेशमा गएका नेपाली युवाहरुले आफ्नो रगत पसिनाको सट्टा पठाउने गरेको रेमिट्यान्स आएन भने देश अघि बढ्ने अवस्था छैन । तर हामीलाई नै ३ तहको सरकार चाहियो । मागेरै भए पनि राजनीति गर्ने सबैलाई सत्ताको सुख भोग गराउने नेपाली नेताहरुको जस्तो सोच सायदै विश्वका अन्य देशका नेताहरुमा आउन सक्छ ।
हामीले व्यवस्था परिवर्तन अरुकै सल्लाह र सुझावमा गर्‍यौँ, संविधान अरुकै सल्लाहमा ल्यायौँ र अब अरुकै निर्देशनमा ल्याएको व्यवस्थाको कार्यान्वनय कसरी गर्छौँ हेर्ने बेला आएको छ । विदेशीको इसारा र निर्देशन पालना गर्दागर्दै हाम्रा नेताहरुले आफूलाई मात्रै बिर्सिएनन्, हाम्रो देशको विराट सम्भावना र अथाह शक्तिलाई समेत बिर्सिन्छन् । उनीहरुले आफूमा मात्रै होइन सारा नेपालीको दिमागमा यस्तो हीन भावनाको घर बनाइदिएका छन् कि आज कोही पनि नेपाली यहाँ केही हुँदैन भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यस्तो हीन भावना कि, आज हामीसँग के क्षमता छ भन्ने कुरा कोही अरु आएर भनिदिनुपर्छ ।
आफूले आफैँलाई नचिन्ने नेपालीहरुको उदेकलाग्दो अवस्था देखेरै भनिएको होला, सुनको कचौरा लिएर माग्न बसिरहेको छ नेपाल भनेर । हामी आफू को हौँ र आफूसँग के छ भन्ने कुरा आफैँ थाहा पाउँदैनौ । त्यसबारे हामीलाई अरु कोही आएर भनिदिनुपर्छ । हाम्रो मौलिकता, संस्कृति र सम्पदाहरु कति अद्वितीय छन् भन्ने कुरा हामीलाई कोही विदेशी अनुसन्धानकर्ता आएर सम्झाइदिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
मलाई त यस्तो लाग्छ, खास–खास नेपाली नेताहरुलाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले नेपाललाई विगठन गर्ने गरी नियुक्त गरेको छ । बाहिर जेजस्तो नाटक गरे पनि भित्रीरुपमा ती खास–खास नेताहरु आफ्नो जिम्मेवारी इमानपूर्वक अदा गरिरहेका छन् । नेपाललाई विगठन गर्न कुनै देशको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने होइन । यो देशलाई अरु कसैले अधीनमा लिनुपर्ने होइन । तर यसको आफ्नो पन र मौलिकताको टाउकोमाथि निरन्तर घन हान्दै गएपछि, हाम्रो आफ्नोपनमाथि निरन्तर विष बमन गर्दै गएपछि कालान्तरमा विगठनको अवस्थामा आफैँ पुगिहाल्छ नि । सम्पूर्ण रुपमा अरुको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएपछि देश हुनु र नहुनुमा के अन्तर हुन्छ र ? भाषा अरुको, भेषभूषा अरुको, संस्कार संस्कृति अरुको, रहनसहन अरुको हुँदै जाँदा देश मात्रै भएर के हुन्छ ?
साम्राज्यवादीहरुले आज हिजोको जस्तो भौतिक आक्रमण गरेर भूगोल आफ्नो बनाउने होइनन् । उनीहरु आज आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा आक्रमण गर्दै आफ्ना एजेन्डा लाद्ने गर्छन् । हो नेपालमा पनि त्यसरी आक्रमण भइहेको छ । जसको माध्यमबाट यो देश विस्तारै विदेशीको क्रिडास्थल बनिरहेको हामीले हाम्रै आँखाले देखिरहेका छौँ ।
धेरै लामो विश्लेषण गरेर पाठकहरुलाई अल्झाइरहनुभन्दा पछि कम्तीमा ०४६ मा भएको परिवर्तनपछिको यो ३ दशकलाई मात्रै विवेचना गर्दा हामी कुन बाटो अख्तियार गरिरहेका छौँ र कसको भरिया बनिरहेका छौँ सबै प्रष्ट हुन्छ । तत्कालीन राजा र जनताको सहमति स्वरुप निर्माण भएको नेपालको संविधान ०४७ कार्यान्वयन नहुँदै नेपालको अहित चाहने विदेशी शक्तिहरुको चलखेल सुरु भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्रले पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेको ३ वर्ष नबित्दै नेपालकै केही नेताहरुलाई हातमा लिएर मुलुकभित्र आगो बाल्ने काम गरियो । माओवादीको नामबाट सुरु भएको त्यो आगो खाली राजनीतिक अस्थिरताका लागि मात्रै थिएन, नेपालको सम्पूर्ण मौलिकतामाथिको धावा बोल्ने काम थियो ।
वि.सं. ५० को दशकयता नेपालको राजधानी काठमाडौँ विदेशी शक्तिहरुको यस्तो उर्बर भूमि बन्यो कि उनीहरुले रोप्नुपर्ने जति सबै रोपे । रोपेनन् मात्र त्यसको फल यतिबेला विस्तारै लागिरहेको छ । एकातिर माओवादीलाई आफ्नै सुरक्षामा राख्ने र नेपालको स्थायित्वमाथि धावा बोल्ने काम गरियो भने अर्कातिर यो देशमा मानवअधिकारदेखि अनेकौं नाममा विश्वभरीका शक्तिहरुले आफ्नो एजेन्डा सेट गर्ने काम गरे ।
विदेशी शक्तिहरुको उक्साहटमा डमरु बजाइरहेका नेपाली नेताहरुले नेपालको परम्परा, स्थायित्व र मौलिकतामाथि त्यो दशकयता निरन्तर धावा बोले । विश्वभरका अनेकौ शक्तिसँग वीरतापूर्वक लडेर बचाएकोे हाम्रो स्वर्ग जस्तो मातृभूमिमाथि यसरी बलात्कार गरियो कि आज पनि मातृभूमिले आफ्नो घुम्टो उघार्न लाज मानिरहेकी छिन् । जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाको एजेन्डा अघि सारियो । तर भित्री रुपमा नेपालको वास्तविक अस्तित्व नामेट पार्ने काम गरियो । सबैभन्दा पहिले जसले देश निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व गरे, उनीमाथि घृणा फैलाउने काम गरियो भने देशैभर रहेका उनका शालिकमाथि धावा बोलियो । त्यसपछि नेपालीहरुको आफ्नो मौलिक भेषभूषामाथि आक्रमण गरियो । संसारमा कहीँ नभएको आफ्नै मौलिक स्वरुपको हाम्रो भेषभूषामाथि आक्रमण गरियो । भनियो– त्यो पोशाक सामन्तीहरुले प्रयोग गरेका हुनाले यो सामन्ती पोशाक हो । नेताको रुपमा उभिएका ती महान बुख्याँचाहरुलाई मेरो प्रश्न– भेषाभूषा सामन्ती थियो भने उनीहरुले बनाइदिएका दरबारहरु के सुकुम्वासीका झुपडी थिए जहाँ राज भएर तिमीहरुले शासन गर्‍यौ ? मानिसहरु यसो पनि भन्न सक्छन् कि– जाबो पोशाक जे लगाए पनि भयो नि त्यसमा के को षडयन्त्र देखेको । अहँ म त्यो कदापि मान्दिनँ । नेपालीत्व समाप्त गर्ने कदममध्येको अर्को कदमको रुपमा मैले यसलाई लिने गरेको छु ।
त्यतिमात्रै कहाँ हो र हाम्रा जनताले श्रद्धापूर्वक मान्ने हजारौँ देवीदेवताका मन्दिर देउथलहरुमा आगो लगाइयो । युगौँदेखिका सम्पदाहरुमाथि बम पड्काइयो । सयौँ वर्ष पुराना गाउँगाउँमा रहेका राजारजौटाका दरबारहरुलाई एकपछि अर्को गरी सखाप पारियो । ती कला र संस्कृतिका संगम जो आज हामीले चाहेर पनि बनाउन सक्दैनौँ । ती दरबार जो जनताकै काममा प्रयोग भइरहेका थिए, तिनलाई समान्तीका अवशेष भन्दै आगो लगाइयो । स्पेनमा बुल फाइट हेर्न संसारभरिका पयर्टक पुग्ने गर्छन् । तर हाम्रा हरेक देवीदेवताको नाममा मनाइने चाडबाडमाथि धावा बोलियो । मन्दिरमा आगो लगाइयो र हाम्रा मौलिक परम्पराका रुपमा रहेका धामीझाँक्रीहरुमाथि भौतिक आक्रमण गरी त्यस्ता परम्परा र रीतिरिवाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गरियो ।
त्यसयता हरेक तिथिहरुमा आफ्नै परम्परा अनुसार नचाइने धामीझाँक्रीहरुका नाच आज देख्न पाइँदैन भने देवीदेवताका मन्दिरहरुमा मनाइने पूजाआजालगायत पनि लगभग बन्द जस्तै भइसके । जसरी उपत्यकाभित्र आज पनि विभिन्न साँस्कृतिक जात्राहरु मनाइन्छन्, लगभग सोही अनुसार आफ्नै शैलीमा नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सधैँ जसो हरेक गाउँ सहरमा आ–आफ्नै खालका संस्कृति र परम्पराहरु थिए । तर माओवादी विद्रोहका नाममा ती सबैमाथि एकपछि अर्को गरी हमला गराइयो ।
उता गाउँमा माओवादीको नाममा देशको मौलिकतामाथि तीव्र आक्रमण गरियो भने यता सहरमा चाहिँ तत्कालीन सरकार चलाउनेहरुको काँधमा चढेर एकपछि अर्को गरी अनेक सन्धि र महासन्धि भन्दै देशको मौलिकतालाई हमला गरियो । यौन अधिकार भन्दै विदेशी संस्कृतिलाई अनुशरण गर्न लगाइयो भने लैंगिक अधिकार भन्दै परिवारभित्र विद्रोह ल्याउने काम गरियो । एनजिओ र आइएनजिओको रुपमा हाम्रो जन्म, व्रतबन्ध, विवाह र मृत्युका संस्कारमाथि सांस्कृतिक आक्रमण गरियो । ती सबै कर्महरु युगौँयुगदेखि हामीले मात्रै गर्ने संसारकै फरक र मौलिक संस्कारहरु थिए । आज लगभग ती सबैै संस्कारहरुमाथि पाश्चात्य संस्कृति हावी भइसकेका छन् । हाम्रा दसैँतिहार मात्रै होइन, वर्षभरि सबै जातजातिले मनाउने आफ्नै र मौलिक प्रकारका चाडबाडहरु पनि लगभग अन्त्यको अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
हाम्रो मौलिक खानपान, हाम्रो रोधी मारुनी समाप्त गरियो । हाम्रो विवाह संस्कारलाई अन्त्य गरियो । हाम्रो संस्कृत भाषामाथि गाउँमा माओवादी लगाएर आक्रमण गरियो भने सहरमा अंग्रेजी सबै कुरा भन्दै आक्रमण गरियो । आजको पुस्ताबाट त्यो लगभग लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । आज नेपालीहरुको मानसिकता यस्तो बनाइएको छ कि अंग्रजी सबै कुरा हो र पश्चिमा विचारधारा उत्कृष्ट विचारधारा हो । तर वास्तविकता त्यस्तो थिएन । संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट त हाम्रो विचारधारा थियो । हाम्रो शिक्षा नीति थियो र उत्कृष्ट थिए हाम्रा परम्परा, संस्कार र मौलिकता । जो विश्वका अरु कुनै पनि देशमा पाउन सकिँदैन थियो । त्यही मौलिकतामा थोरै आधुनिकताको मिश्रण गरिदिएको भए हाम्रो देश तिनै हाम्रो मौलिक संस्कार र मौलिक कला संस्कृतिकै भरमा आर्थिक रुपमा समेत सम्पन्न भइसक्ने थियो । तर आफ्नो जति सबै खराब र अरुको सबै राम्रो भन्ने सोच योजनाबद्ध रुपमा विकास गराइसकेपछि अब हामीसँग के बाँकी रह्यो र ?
यस्तो लाग्छ नेपाली बोलिरहेको कोही पनि नेपाली युवाले बिचबिचमा अंग्रेजी शब्द घुसाएन भने त्यो असभ्य दरिने भय भइरहेको छ । सके अंग्रेजीमा मात्र बोल्नुलाई बडप्पन मानिन्छ । नेपाली बोलिहाले पनि नेपांग्रेजी बोलिएन भने सभ्य समाजको सदस्य हुनै समस्या आउनेवाला छ । बरु आफ्नो मातृभाषा र राष्ट्रिय भाषाभन्दा छिमेकी भारतको भाषा हिन्दीको प्रचार भइरहेको छ । भारतीय विचारधाराका पक्षधर रहेका र नेपाललाई सधैँ भारतको अधीनस्त राख्न चाहने केही सांसदहरु योजनाबद्ध रुपमा आफ्नो मातृभाषा र राष्ट्रिय भाषालाई लात हान्दै सगौरव हिन्दी भाषामा भाषण गरिरहेका छन् । त्यो पनि सम्मानित संसदमा । तर नेपाली बोल्नु भनेको असभ्यताको परिचायक हो भन्ने हीन भावनाको विकास गरिएको छ । कस्तुरी आफ्नै शरीरमा रहेको वीणाबारे चाल नपाएर जंगलभरि भौँतारिए झैँ हामी आफैँसँग भएका अमूल्य निधिहरुबारे जानकारी नपाएर अरुको नक्कल गरिरहेका छौँ । अझ अर्को शब्दमा हाम्रा आजका हर्ताकर्ताहरुले आफ्नै घरमा आगो लगाएर अरुको आँगनमा शरण लिन बाध्य पारेझैँ हुन्छ ।
आफूलाई राजनीतिका चतुर खेलाडी सम्झिरहेकाहरुलाई यो पनि हेक्का छैन होला कि– आफू कसरी विदेशीको मदारी बनेँ भन्ने कुरा । आफूलाई अघि सारेर विदेशीहरुले नेपालको मौलिकता कसरी स्वाहा पारे भन्ने कुरा । उनीहरुलाई थाहा छ कि छैन उनीहरु नेता होइनन्, विदेशीका एजेन्डा बोकिदिने भरिया मात्रै हुन भन्ने कुरा ? मित्रहरु ! नेता तपाईंहरु जस्तोलाई भनिँदैन । नेता हुन विदेशीको एजेन्डाको भरिया होइन, आफ्नो मौलिकता र क्षमता चिन्नुपर्छ । जस्तो महात्मा गान्धी टाइसुट लगाउन नजानेर वा नसकेर एकसरो खादीमा भारतीयहरुको नेता बनिरहेका थिएनन् । भारतमा राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुनुपूर्व उनी टाइसुटमै वकालत गरिरहेका थिए । उनले आफ्ना मौलिकता बचाउन त्यो गरेका थिए । तर बिडम्बना हामीले जसलाई नेता भन्यौँ, उनीहरुले बचाउन त कता हो कता उल्टै आफैँ आगो झोस्न अगुल्टो लिएर अघि लागे ।
योबीचमा नेपाल सरकारले मानवअधिकार लगायत अनेकौं सन्धि महासन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । जसले नेपालीहरुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाए, सम्भवतः उनीहरुको देशले त्यस्तो कुरामा हस्ताक्षर गरेको छैन । हाम्रो आफ्नोपनमाथि हाम्रै नेताहरुको बुई चढेर विदेशीहरुले यसरी हमला गरे कि, अब हामीले ती हाम्रा संस्कार संस्कृति र परम्पराहरुलाई पुनः उठाउन असम्भवप्रायः छ ।
संस्कृतिमाथिको आक्रमण, परम्परामाथिको आक्रमण कुनै राजनीतिक व्यवस्थामाथिको आक्रमण जस्तो सामान्य होइन । राजनीतिक व्यवस्था ढले फेरि उठाउन सकिन्छ तर सामाजिक आक्रमण र साँस्कृतिक आक्रमणबाट थलिएको देशलाई पुनः आफ्नो मौलिकतामा फर्काउन असम्भवप्रायः हुन्छ । यो त एउटा संक्षिप्त उदाहरण मात्रै हो । तर ती सबैमाथि एकपछि अर्को गरी अहिले पनि आक्रमण जारी छ ।
बाह्य हस्तक्षेपको शृंखला यतिबेला पनि सकिएको होइन, झन अनेकौं रुपमा निरन्तर बढिरहेको छ । परिवर्तनको नाममा नेपालमा गणतन्त्र ल्याइयो । गणतन्त्रका बारेमा त नयाँ पुस्ता आन्दोलन गरिरहेका बेला कहीँकतै छिटफुट रुपमा बोलेको थियो । अर्को कुरा राजतन्त्र र या भनौँ प्रजातन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली हो, आफ्नोपनसहितको देश बाँचि नै रहे ती विषय त समयम समयमा परिवर्तन भई नै रहनेछन् । तर जनताले सोच्दै नसोचेका विषयहरु विदेशीको इसारामा एकाएक परिवर्तन गर्ने काम गरियो । देशको मौलिक परम्परा र आफ्नोपनको पहिचान दिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हिन्दू धर्ममाथि धावा बोलियो र देशलाई अनाहक धर्म निरपेक्षतामा लैजाने भनियो । वास्तवमा हिन्दू कुनै धर्म थिएन, यो त जीवनपद्धति थियो । त्यसका जीवनपद्धतिहरुलाई पहिले नै विभिन्न रुपमा आक्रमण गरिएको थियो । तर त्यतिले मात्रै चित्त नबुझाएका बाह्य शक्तिहरुले हिन्दू धर्मलाई जरैदेखि उखेल्ने काम गरिछाडे । र विदेशीहरुको कुत्सित चाहना पू्रा गर्न नेपाली नेताहरुले मतियारको रुपमा आफ्नो भूमिका इमानपूर्वक निर्वाह गरिछाडे ।
धर्म संस्कृति र मौलिक परम्परामाथिको आक्रमणले मात्रै चित्त नबुझाएका विदेशीहरुले फेरि नेपाली भरियाहरुकै सहयोगमा नेपाललाई भौगोलिक रुपमा विभक्त गर्ने र जातजातिको रुपमा विभाजित गराउने काम गरे । अन्य क्षेत्रमा लगाइएको जातीयताको आगो त यतिन्जेल सामान्य हुँदै गएको छ । तर मधेस तराईमा भने कहिल्यै ननिभ्ने आगो लगाएर उनीहरु गए । सग्लो देशलाई आर्थिक रुपमा निम्छरो रहेका बेला मुलुकलाई संघीयताका नाममा प्रदेश सरकारहरुको निर्माण गर्ने काम गरियो । म चुनौती दिन चाहन्छु, के नेपालका नेताहरुसँग आँट छ संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय जनताले चाहन्छन् या चाहँदैनन् भनेर एक वचन सोध्ने । यो कुरा उनीहरुलाई पनि थाहा छ, यो विषय जनताको विषय नै होइन, विदेशीको विषय हो । नेपाली नेताहरुले जनतामाथि घात गर्दै विदेशीको एजेन्डा बोकिदिएका मात्रै हुन् भन्ने कुरा ।
एकातिर नेपालका धर्म संस्कृतिदेखि मौलिक परम्परा र रीतिरिवाजमाथि एकपछि अर्को गरी आक्रमण गरियो भने अर्कातर्फ नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर उनीहरु आफ्ना रणनीति पूरा गर्नतर्फ लागे । इतिहासमा पश्चिमाहरुले नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छिमेकी चीनविरुद्ध खम्पा बिद्रोह गराए । भलै त्यो बेला हाम्रो सेनाले त्यो विद्रोहलाई दबायो । त्यसयता छिमेकी भारतको अर्थतन्त्रमाथि धावा बोल्ने गरी नक्कली भारुको ओसारपसारको केन्द्र बनाउनेदेखि विमान अपहरणसम्मका काण्ड गराउने काम पाकिस्तानले गर्‍यो । अवैध सुनदेखि डलरसम्मको ओसारपसारको केन्द्रबिन्दु नेपाललाई बनाउँदै लगिएको छ । यहाँसम्म कि शक्तिशाली देशहरुले यसलाई आफ्नो खेलमैदान त बनाए बनाए, हुँदाहुँदा कम शक्तिशालीहरुले पनि यही भूमिलाई आफ्नो क्रिडास्थल बनाउन सुरक्षित सम्झिए ।
हामीले देखिरहेका छौँ आफ्नो स्वार्थ पर्दा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा रहेको बताउन पछि नपर्ने २ छिमेकी मुलुक भारत र चीनले लिपुलेकबारे आफ्नो अनुकुल २ पक्षीय सम्झौता हामीलाई सोध्नसम्म आवश्यक ठानेनन् । जब कि ऐतिहासिक रुपमा लिपुलेक–कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो भूभाग रहेको स्वयं भारत र चीनलाई समेत जानकारी छ ।
आज नेपाल त छ तर आफ्नोपन बिनाको । मुलुक त छ तर मौलिकताबिनाको । भूमि त्यही हो तर भ्रातृत्व खोसिएको छ । बाह्य शक्तिको क्रिडास्थलका रुपमा देशले आज पनि गम्भीर संकट भोगिरहेको छ । बिडम्बना त के भने बाह्य शक्तिहरुलाई खेल्ने भूमि मिलाइदिने र उनीहरुका स्वार्थपूर्ण एजेन्डा बोक्न भरियाको भूमिकामा आज पनि अरु कोही नभएर हाम्रै विभिन्न नामका नेताहरु छन् । आज हामी देशको विकास भएन, देश समाप्त भयो, नेताहरुले सबै बिगारे भनिरहेका छौँ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले भन्दै आएका ती नेताहरु वास्तविक रुपमा तपाईं हाम्रा नेता नभएर बाह्य शक्तिका अनेकौं स्वार्थका सारथी थिए । आज पनि हाम्रो देश नेपाल बाह्य शक्तिहरुको खेल मैदान हो । र त्यो खेल मैदान फराकिलो पार्ने काममा आज पनि हाम्रै अगुवाहरु लागिरहेका छन् । जति छिटो यो कुरा नेपालीले बुझ्ने छन्, त्यति छिटो नेपालको कल्याण होला ।
(लेखक मायामी विश्वविद्यालय, अमेरिकामा प्राध्यापन गर्छन्)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १२, २०७७, ०९:२२:००